Posted by Lyndon deed	 1 Comment
Kratom waa geedo yaryar oo dabiici ah oo uu soo qaadan saxaafadu in waddamada Maraykanka. Dad badan oo Illinois fekerayaan in ay gobolka u saamixi doontaa in ay ka faa'iidaystaan ​​isticmaalaya aadka loo doondoonayo dhalatada. Waayo, hadda, Foomamka budo iyo qaddar Kratom weli waa laga helaa Illinois, iyo xukuumadda federaalka ay wali u aragto foomamkan oo ah walaxda in ay sharci. Taas macnaheedu waxa macno ah ma samaynayso in magaalada Illinois aad ku jirtid-Chicago ama meelo kale-aad wali soo gadan kartaa oo isticmaali Kratom. Maqaalkani waxa uu qaban doonaan dhinacyada sharciyeed ee badeecada Kratom waxayna ka bixiyaan muuqaal ah oo ku saabsan sida loo iibsan doogga ee meesha aad. Iibso Kratom Online halkan Ganacsato talinayo.
Sharciyada Kratom ee Illinois
Waxaa la yaab ma laha Kratom waa sharci Illinois, dowlad caan ku ahayd falsafad xoriyadda shaqsiga ah. Currently, waxaa jira ma mid la socodka sharciga ama la xanibo in la isticmaalo oo ka mid ah dhirta iyo taagayo ay. Ma jiraan wax xad ah oo ku saabsan sida ay u badan oo ah walaxda laga iibsan karaa, oo waxaa jira ma hadal ah oo isku dayaya in ay soo rogaan shuruucda ku saabsan isticmaalka geedo yaryar oo mustaqbalka dhow - ugu yaraan heer gobol ah. On heerka federaalka, waxaa jira ciidamada ee FDA ee doonaya in ay ka hortagi Americans ka yimid inay awoodaan inay isticmaalaan dhalatada this, laakiin hadda waa sharci iyo kala duwanaanshaha.
Taas macnaheedu waxa weeye in aad ka iibsan kartaa, leeyihiin on xaddiga, oo wuxuu dhammayn doonaa Kratom sida ugu badan ee aad rabto. Maxaad waa inuu noqdaa sidan tan Kratom waa geedo yaryar oo dabiici ah saamaynta badan ballaaran faa'iido? Macaamiisha da'yarta ku saabsan sida geedo yaryar oo taasi ayaa si weyn u soo hagaagtay caafimaadkooda iyo awoodda ay u raaxaystaan ​​noloshooda. Dadka ayaa waxaa loo isticmaalaa si loo kordhiyo tamarta, inaad xanuunka iska yarayso, in ay diiradda saaraan, in walaaca caawin, iyo si loola dagaallamo depression. Waxaa xitaa loo isticmaalo in lagu caawiyo dadka balwada baradyaadl daawooyinka xanuunka iyo waxyaabaha kale ee opiat by qaboojiyo astaamaha u-barashada.
Kratom iyo FDA ee
Waxay u badan tahay in aadan heli doonaa macluumaad faahfaahsan ama macluumaad isticmaalka meelaha meesha aad ka iibsan. Tani waa sababta oo ah waxaa jira qaar ka mid ah xeerarka FDA in xayiraad meel ku saabsan meelaha ay iibiya Kratom. Haatadan la joogo, Kratom looma haysto inuu yahay wax lala FDA-ogolaaday. Oo ma noqon doonto in muddo ah sababta oo ah suuqa xaddidan ee wax soo saarka iyo la'aanta $100 million heli karo si ay uga caawiyaan geedi socodka ansixinta FDA.
Inkastoo caddaymaha la xaqiijiyay ee waxtarka doogga ee, qofna ma iibin karo sheyga iyo faano faa'iidooyinka caafimaad ay tan iyo FDA ee ma ha Kratom lagu xayaysiiyo sidii uu jirku uga dhigay u wanaagsaneyn isticmaalka bini'aadamka. Illaa iyo hadda, waxa ay leedahay in la suuq sida xarunta cilmi baarista ama walax ethnobotanical tan iyo markii ay lama soo xusuusan karaa sidii uu jirku uga wada baabbi'iyey. Si kastaba ha ahaatee, tani weli ma sii dadka ka isticmaalaya geedo yaryar oo sida ay arkaan taam.
Halkee Iibsashada Kratom ee Illinois
Kratom ah iibiyaa budo, soosaaray, foomka kaabsal oo inta badan suuqyada iyo dukaamada qiiqa ee Illinois. Waxaad Google ka raadin kartaa Kratom oo malaha ka heli iibiyaha ah in aad xaafadda gaar ah. Inkasta oo tani ay u muuqan kartaa sida fikrad wanaagsan isagoo dukaan madaxa ama tafaariiqle maxaliga ah ee xaafadda aad, ma aynu ku taliyo in qaadaan waddadaas, sababtoo ah waxaad la kulmi kartaa inaad bixiso qiimaha adage waysaan maxali ah. Halkan sababta… Fiiri boggayaga tusmo saamaynta nooc Kratom halkan.
Waxaa dalbo Online
Inta badan dukaamada degaanka Chicago iibiso Kratom by caleen ee u dhexeeya $5 - $15 per dose tan iyo markii ay tiraan dheeraad ah si ay "legal sare" dadkii badnaa oo waxay kaloo leeyihiin kor socdka ah ay sabab u ahayd kharashka socodsiinta dukaan jirka. Online, waxaad ka dalban kartaa wax la mid ah qiimo aad u hooseeya halkii dose (sida $0.50 si ay u $2.00). Magaca Brand kaabsoosha OPMs Kratom iibiso laba kaniini $15.95 dukaamada ka. Waxaad ka heli kartaa lacagta la mid ah ka brand kale oo kaliya qayb ka mid ah qiimaha in online. Haddii aad soo iibsato in badan, waxaad ka heli kartaa heshiisyo xitaa jaban aad sugaya internetka
Waxa kale oo aad looga walaaco, waxyaabaha aqriska iyo B-fasalka marka aad ka iibsato dukaan ku yaal deegaanka, taas oo ka badan ama ka yar waxay yeelan doonaan xulashada xoogaa kooban oo foomamka Kratom. The dukaammada yihiin oo kaliya xiiseyneysa inay iibiso magac astaanta ah. Iyagu ma ay isku dayayaan in ay abuuraan Kratom tayo sare leh oo ka beeraha sumcad ee Asia. Taasi waa sababta aynu ku talineynaa dadka u sheegaya in iibiya botanical online ku takhasusay geedo yaryar oo tan iyo bixiyaan alaabta ka wanaagsan iyada oo dhan mataalada magac astaanta. Qaar badan oo ka mid ah shirkadaha bixiyaan heerka maraakiibta bilaash ama dhimista in Illinois oo aad filan kartaa xirmo si aad u timaado Chicago maalmood gudahood. Qiimaha Kratom waxaa aad u yar ku xiran tahay sida badan oo garaam oo ah budada aad isticmaasho si joogto ah.
Super Green Malay Kratom Review, Qaadashada & Raadka
Halka Laga Helo Kratom Online